နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: > နားဆင်ရန် +ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် - Flash သီချင်းများ+MP3သီချင်းများ+MP4သီချင်းများ(((4)))
> နားဆင်ရန် +ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် - Flash သီချင်းများ+MP3သီချင်းများ+MP4သီချင်းများ(((4)))
Dream Theater May 23, '09 1:23 AM
Dream Theater ရဲ့အယ်လ်ဘမ်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတီးပိုင်းဝါသနာပါသူများ ဒီအယ်လ်ဘမ်ကို မဖြစ်မနေ နားထောင်သင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။
အမျိုးအစား - Progressive medal
Dream Theater ကတော့ တီခတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အကောင်းဆုံးဝိုင်းလို့ ပြောရင်မလွန်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ အ တီးသမားလေးယောက်လုံးဟာ အတွဲညီညီနဲ့ လက်စွမ်းပြတီးခတ်နိုင်ကြပါတယ်။ အတီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာ လေ့လာနေသူ လူငယ်များအဖို့ လက်မလွှတ်တန်းနားထောင်သင့်ပါတယ်။
အမျိုးအစား - Progressive metal
Yoshi (Sample) May 22, '09 11:04 AM
၁။ နှုတ်ဆတ်ပါတယ် Feturing: အာကာ
၂။ Yoshi & Ycho
Tags: yoshi, ...
တေဇ (Sample) May 22, '09 10:52 AM
၀၅။ Welcome From North Okkalapa
၀၆။ဟာသအချစ်” & “ဘာလုပ်မှာလဲ(Click Here Download)
၀၇။ရက်စက်တယ်မင်း (Click Here Download)
၀၈။ရိုးသားတဲ့အချစ် (Click Here Download)
၀၉။ဘယ်မှမသွားပါနဲ့ (Click Here Download) Mediafire
Tags: တေဇ, ...
ဇင်အောင် - ကောင်မလေး May 22, '09 10:43 AM
Tags: ဇင်အောင်, ...
လင်းရာ May 21, '09 7:25 AM
လင်းရာ - မျှော်လင့်ရင်းရူး
၄။ အချစ်ပျောက်သူနဲ့ အချစ်ကြောက်သူ
ရင်ခုန်နှုန်း၁၄ စုံတွဲသီချင်းခွေ May 20, '09 10:36 AM
မချော ၁၁ ယောက်နဲ့ ဟဲလေးရဲ့ VCD အကျဉ်း
The Best of Melody World May 20, '09 10:18 AM
၁။ မယ်လိုဒီဝေါလ် - နေနေ
၂။ နောက်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ရင်းနဲ့ - ထက်နေကြည်
၃။ ဆက်လျှောက်ရမယ့်လမ်းများ - နန္ဒာ
၄။ အပျင်းပြေရည်းစား - မိုးစက်
၅။ သီချင်းလက်ဆောင် - ချမ်းချမ်း
၆။ မချစ်နဲ့တော့ - ကိုကိုမောင်
၇။ ပြန်ဆုံမယ့်နေ့စောင့်ဦးနော် - အိအိမွန်
၈။ ဝေဒနာမီးခိုးများ - ကောင်းဇော်
၉။ ငယ်ချစ်ပုံပြင် - ခိုင်ရွှေဝါ
၁၀။ အရင်ကအတိုင်း - နောင်နောင်
၁၁။ အိမ်မက်အနမ်း - အောင်ခန့်
၁၂။ ပြန်လာမယ့်အချိန် - အောင်ခန့်
၁၃။ မပိုင်ဆိုင်တဲ့သီချင်း - ရေဗက္ကာဝင်း
Tags: မိုးစက်, ကိုကိုမောင်, နောင်နောင်, အောင်ခန်, ရေဗက္ကာဝင်း, ထက်နေကြည်, ခိုင်ရွှေဝါ, နန္ဒာ, ချမ်းချမ်း
အနာဂတ်များ May 18, '09 10:01 AM
၀၁ အနာဂတ်များ - အောင်ခန့်
၀၂ ဆယ်ကျော်သက် - ချမ်းချမ်း
၀၃ ဘ၀ခရီး - မင်းမင်းဦး
၀၄ ဘယ်မှာနေလဲ - နေနေ
၀၅ အိမ်မပြန်ချင်သူ - ထက်နေကြည်
၀၆ မင်းရဲ့အဝေး - အောင်ခန့်
၀၇ ရူးသွားပြီ - ချမ်းချမ်း
၀၈ ကောင်းကင်မဲ့ငှက် - မင်းမင်းဦး
၀၉ အရှေ့နဲ့အနောက် - နေနေ
၁၀ ဘယ်လိုရှင်သန်မလဲ - ထက်နေကြည်
၁၁ ပြောင်းလဲခြင်းမဲ့အချစ်များ - Group
Tags: ထက်နေကြည်, နေနေ, မင်းမင်းဦး, အောင်ခန့်
တစ်မြေထဲမှာ May 17, '09 2:01 AM
၀၁။ တစ်မြေထဲမှာ - Group Song
၀၂။ တောင်ဇလပ်ပင်အောက်က သဇင်ချစ်သူ - အယ်လ်လွန်းဝါ
၀၃။ ဖားစည်မြေကဖိတ်ခေါ်သံ - မီးမီးခဲ
၀၄။ မဟာ (၁) - စည်သူလွင်
၀၅။ စောရအိုင် - ရေဗက္ကာဝင်း
၀၆။ မချစ်ဖူးသေးသူမို့ - ဆုန်သင်းပါရ်
၀၇။ မြေပြန့်သူလေး - စိုင်းထီးဆိုင်
၀၈။ ချစ်သောနေ့ - စင်ဒီ + ကြိုးကြာ
၀၉။ ကလေးသီချင်း - ဟက်ကက်
၁၀။ မဟာနွယ် - ၀င်းကိုခိုင်
၁၁။ ကျောင်းတုန်းကဇာတ်လမ်း - ဒေါင်းလွဏ်း
၁၂။ ကောက်သစ်စားပွဲတော် - Kဂျာနူး
၁၃။ အိမ်မက်လှလှမက်ပါစေ - ဘွေမင်းလျန်
၁၄။ မလိခမှအလွမ်းလေးတွေ - အယ်လ်ဆိုင်းဇီ
၁၅။ ရင်ငွေ့ - ချောစုခင်
၁၆။ ရင်ထဲကတောမီး - မေရီလင်း
၁၇။ ဆောရီး - အဒဲ
၀၁။ ချစ်ကြပါ - စောဖိုးခွားနှင့်အဖွဲ့
၀၂။ မနောအလှပန်းမောင့်ချစ်သူ - အယ်လ်ခွန်းရီ
၀၃။ ကောင်းလေးချစ်သူ - ဆုန်သင်းပါရ် ၊ စင်ဒီ ၊ ကြိုးကြာ ၊ မေရီလင်း
၀၄။ အပျိုဟိုင်းကြီးရဲ့  ဒေါသ - SNO
၀၅။ မလွမ်းဘူး - ကေကေ
၀၆။ ကိုယ်ပိုင်အချစ် - နန်းမြတ်သန္တာကို
၀၇။ အလွမ်းပြေထိုင်ခုံတန်းလေး - စံပီး
၀၈။ အေးဆေးပဲ - အားမူ
၀၉။ ကမ္ဘာနဲ့အချစ် - ဘရိတ်ကီ အားမူ
၁၀။ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခြင်း - ဇမ်းနူး
၁၁။ ငွေတောင်တန်းဆီပြန်လာပါ - စိုင်းဆိုင်မောဝ်
၁၂။ မုန်းပြီတဲ့လား - လေးလေးဝါး
၁၃။ အိုကစ္တပ - မြတ်ခိုင်ကျော်
၁၄။ မပြောင်းလဲတဲ့အချစ် - ဘေးဘီ
၁၅။ မင်းနဲ့မှဖြစ်မယ် - စောခူဆဲ
၁၆။ ဘာမှထပ်မမေးနဲ့ - ဖြူနှင်းပွင့်သွေး
၁၇။ တစ်ခုတည်းသော - ကိုင်ဇာတင်မုံ
Tags: lခွန်းရီ, ရေဗက္ကာဝင်း, အယ်လ်ဆိုင်းဇီ, /, l လွန်းဝါ, မီးမီးခဲ, ဆုန်သင်းပါရ်
Rain May 16, '09 1:13 PM
04. Love Story (0912……)
09. Deo Kkeullyeo (Feat. C-Luv)
11. 9wol 12il
02. Oh Yeah! feat. AI
07. I’m So Hot (Korean song)
09. Because of you (Korean song)
12. Free Way - STY Gin n’ Tonic Remix
02.I’m coming(Feat. Tablo)
04.In my bed
05.Notasingle day
07.Him & Me(Feat. Dynamic Duo)
13.To My Friends
01. Words I wanted to say
02. It’s Raining
12. I’m Searching
16. It’s Raining (making the video)
01. You Already Knew
02. Why Do I Love You Again
04. I to You
05. Even You
06. Do You Love Me Or My Fame
07. Ways To Avoid The Sun Radio Mix
09. The Empty Space
10. Instead of Goodbye
11. Ways To Avoid The Sun
12. Even When The Sun Rises
05. Can’t Get Used to It
07. Instead of Saying Goodbye
08. Like You (feat. Sea)
09. Am I Not Good Enough
11. What’s Love (feat. Danny, Lexy, and JYP)
Tags: international album
Baby VOX May 16, '09 1:09 PM
Baby VOX Re.V Vol.1
01. Never Say Good-bye
05. Catch Me [Feat. Verbal Jint]
07. Get Up [Re.V]
08. Killer [Re.V]
09. By Chance [Re.V]
Baby VOX Re.V Vol.2
06. Lux (Byeol)
07. Silpeun Byeoreseo
11. Patron (Manhwa Geondeureseu)
12. Why (MR)
03. Missing Up
05. Kkoch u Nui Bikini
06. Sarang Hae Yo
08. Haneul Gwa Hammkkehan Sarang
09. Summer Stay
11. Love And Extasy
12. Get Up (MR)
01. Ya Ya Ya
03. Pae Ja Bu Hwaljeol
08. Ya Ya Ya Remix (TV Version)
02. Meorihaneyn Nal
05. Geudeulmanui Sesang
09. Namjaege (Instrumental)
ဘိုငယ် - ပြေးလမ်း May 16, '09 6:55 AM
ဘိုငယ် - ပြေးလမ်း
သီချင်းရေး - ကေအေတီ၊ မြင့်မိုးအောင်၊ ရွှေဂျော်ဂျော်၊ မောင်သစ်မင်း နှင့် အငဲ
၁။ အနီရောင်စက်ဘီး (ရွှေဂျော်ဂျော်)
၂။ သီချင်းလေးဆုံးအောင်ဆိုမယ် (မောင်သစ်မင်း)
၃။ နှောင့်ယှက်တဲ့လူ မဖြစ်ချင်ဘူး (မောင်သစ်မင်း)
၄။ ပြစ်ဒဏ် (မြင့်မိုးအောင်)
၅။ လွတ်လပ်ခွင့် (မြင့်မိုးအောင်)
၆။ ဝေးလွင့်ပန်း (ကေအေတီ)
၇။ ဇတ်သိမ်းခန်း (အငဲ)
၈။ မေးခွန်း (မြင့်မိုးအောင်)
၉။ လရောင်ဆမ်းတဲ့အလွမ်း (အငဲ)
၁၀။ နင်အလုပ်မရှိတိုင်း (ကေအေတီ)
၁၁။ ပြန်ဖတ်ကြည့် (ရွှေဂျော်ဂျော်)
၁၂။ သီချင်းလေးဆုံးအောင်ဆိုမယ် (Bonus)
Download With iFile
Tags: ..., ဘိုငယ်
Posted by Hajee Than Hla Oo at 10:23 AM